Code of Conduct | City Properties Co., Ltd
City Mart Centers
City Kids Zone
City Properties Co.,Ltd မှဒါရိုက်တာများ၊ ၀န်ထမ်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအားလုံးတို့၏ အဂတိလိုက်စားမှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူပြုလုပ်ခြင်းစသည့် လုပ်ရပ်များအားလုံးကို သည်းခံခွင့်လွှတ်မည် မဟုတ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ City Properites Co.,Ltd မှ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ လိုအပ်သည်ထက်ပိုမိုသော အခွင့်အရေးအကျိုးအမြတ်များကို ပေးပါမည်ဟု ကတိပေး၍သော်လည်းကောင်း၊ ကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုရပါ။
ထို့အပြင် မလျှော်ဩဇာလွမ်းမိုးခြင်းဖြင့် ပြည်သူအများအကြားသို့မဟုတ် ပုဂ္ဂလိက၀န်ထမ်းများအကြား၌ မှန်ကန်သောနည်းလမ်းများဖြင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပါ။
အဆောက်အအုံဥပစာ၏ အတွင်းပိုင်း မည်သည့်ဧရိယာများတွင် မဆို ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ အဆောက်အအုံဥပစာအတွင်း မည်သည့်ဝန်ထမ်းမျှ တရားမ၀င်သော ဆေးဝါးများကို လက်ဝယ်ထားရှိခွင့်မရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဝန်ထမ်းများသည် ဌာနခွဲများ၏ အဆောင်အဦးဥပစာများနှင့် ယင်းတို့၏ ပရ၀ဏ်(အဆောက်အဦး ဥပစာဝင်း)အတွင်းရှိနေစဉ် ဥပဒေနှင့်ညှိစွန်းသော ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းနှင့် အရက်သေစာသောက်စားခြင်းတို့ကို လုံးဝပြုလုပ်ခွင့် မရှိသည့်အပြင် ယင်းဆေးဝါးများကို သုံးစွဲပြီးမှ လာရောက်လာခြင်း၊အရက်သောက်စားပြီးမှ လာရောက်ခြင်းတို့ကိုလည်း လုံးဝ ခွင့်မပြုပါ။
မိမိအလုပ်ဝင်ချိန်ထက် ၂၅မိနစ်အောက် နောက်ကျမှုဖြစ်လျှင် နောက်ကျမှု (၁)ကြိမ်အဖြစ် သတ်မှတ်မည်။
မိမိအလုပ်ဝင်ချိန်ထက် ၂၅မိနစ်အောက် နောက်ကျမှု(၅)ကြိမ်နောက်ကျပါက လစာမဲ့ခွင့်(၁)ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လစာ(၁)ရက်စာဖြတ်တောက်မည်။
တစ်လအတွင်း(၁၀)ကြိမ်ထက် ပိုနောက်ကျပါက နောက်ကျခြင်း အတွက် သတိပေးခြင်း (Late Warning) ပေးခြင်း ခံရမည်။
၂၅မိနစ်အထက် နောက်ကျမှု(၁)ကြိမ်ဖြစ်လျှင် လစာမဲ့ခွင့်တစ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လစာ(၁)ရက်စာ ဖြတ်တောက်မည်။
ထိုနေ့အတွက် ထမင်းစာရိတ်နှင့် လူနေမှုစရိတ် ခံစားခွင့် ရှိသည်။
တစ်လအတွင်း(၁၀)ကြိမ်နှင့် အထက်နောက်ကျပါက ရုံးခန်းတွင်ခေါ်ယူ၍ သတိပေးခြင်းခံရမည်။
တစ်နှစ်အတွင်း ခေါ်ယူသတိပေးခြင်း (၃)ကြိမ်ရှိပြီနောက် စာဖြင့် သတိပေးခြင်းခံရမည်။
၂၅မိနစ်အထက် နောက်ကျမှု(၁)ကြိမ်ဖြစ်လျှင် လစာမဲ့ခွင့်တစ်ရက် အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး လစာ(၁)ရက်စာ ဖြတ်တောက်မည်။
ထို့နေ့အတွက် ထမင်းစရိတ်နှင့် လူနေမှုစရိတ်ခံစားခွင့် ရှိသည်။
တစ်နှစ်အတွင်းခေါ်ယူ သတိပေးခြင်း(၃)ကြိမ်ရှိနောက် စာဖြင့် သတိပေးခြင်း ခံရမည်။
စာဖြင့် သတိပေးခြင်းခံရပြီး နောက်ထပ်(၁)ကြိမ်ထပ်မံကျူးလွန်ပါက အလုပ်မှ ရပ်စဲခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
အလုပ်ဝင်ချိန်မှ(၂)နာရီ အတွင်းမဖြစ်မနေ ခွင့်တိုင်ကြားရန်။
လူကြုံပါး ခွင့်တိုင်ကြားခြင်း မပြုလုပ်ရန်။
Telephone ကို မိမိကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက် အသုံးခြင်း။
Notice Board တွင် တခြား အတင်းအချက်အလက်များ ရေးခြင်း။
၀ယ်သူမေ့ကျန် ပစ္စည်းများအား သိမ်းထားခြင်း။
၀ယ်သူ/ရောင်းသူများထံမှ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ရယူလက်ခံခြင်း။
၀န်ထမ်းအားလုံးသည် Supplier/Customerထံမှ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် ၀ယ်ယူခြင်း၊ အကူအညီတောင်းခံခြင်း၊ လက်ဆောင်ပစ္စည်း လက်ခံရယူခြင်း။
အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ဆက်နွယ်မှုများ၊ လူမှုရေး ရှုပ်ထွေးခြင်းများ။
အချင်းချင်း အုပ်စုဖွဲ့ စည်းရုံးမှု ပျက်ပြားအောင် လှုံဆော်ခြင်း၊ သွေးထိုးခြင်း။
၀န်ထမ်းအချင်းချင်း မသင့်မြတ်အောင် ၀ါဒဖြန့်ချီခြင်း
City Properties Co.,Ltd တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော R-6နှင့်အထက် ၀န်ထမ်းများမှလွဲ ကျန်ဝန်ထမ်းများသည် တူညီဝတ်စုံဝတ်ဆင် ရမည်။
Search by Shopping Center City Mall St.john City Mart Center Marketplace Center Ocean Center
73-76, Waizayantar Road. Thingangyun Township. Yangon, Myanmar
Tel : +951-8565494 , +951-8560402
For City Mall St.John
Ma Ei Thinzar Thaw
09-451973965 , 01-573286
For City Mart and Marketplace
Ma Theint Thiri Zin
For Ocean Centers
Ma Noe Noe Thet Oo
© 2018-2022 City Properties Co., Ltd. All rights reserved. Web Design by NetScriper